CO₂ Laser for Fashion neMpahla Industry - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
CO₂ Laser for Fashion noShishino Clothing
Laser CO₂ ezingubeni
OMKHULU Laser owakha CO₂ laser machines ukusika ukuwasebenzisa olunye, umvumbo kunye plaid amalaphu, amalaphu aqhelekileyo eziprintiweyo ingakumbi iisuti siko umyalelo omnye.
MTM High kakuhle (wenza-to-umlinganiselo) kunye nenkqubo laser ahlabayo ekrelekrele.
Injongo: olululo / ukonga Material / wezaBasebenzi ukonga / Zero inventory / Okrelekrele
Laser Cutting kunye nemiqadi kwishishini lempahla
Ngenxa ukuthandwa ezikhulayo eyolukiweyo, fashion nezambatho shishino iyakhula ngokukhawuleza. Kwaye kuya kuba elifanelekileyo iinkqubo zoshishino ezifana ukusika mfanekiso. Wokwenziwa kwakunye nezinye izixhobo zendalo ngoku badla kunqunyulwa ematyeni kunye neenkqubo laser . Ukususela amalaphu babakhe, amalaphu umnatha, amalaphu ilastiki, amalaphu Sew ukuya nonwovens kunye felts, phantse zonke iintlobo amalaphu kunokuba laser zigqithiswe.
Traditional eyenzelwe vs. laser Cutting
Kulo ukuthunga eqhelekileyo, yeyona ngokubanzi, kulandele ahlabayo ngoomatshini ahlabayo manual. Zombini ezi ndlela zokwenza isebenza umsebenzi ukusika ophezulu-volume, ilifinyeze ukuchaneka ayikho phezulu. Umatshini laser ukusika ilungele ngesambatho-volume amancinane, multi-iintlobo ukuthunga, ingakumbi zeefashoni fast kunye nempahla siko.
Ukusika Traditional bhukwana imfuno phezulu mgawuli ipateni kunye Isipha emva ahlabayo. Laser ukusika has a ukungaguquguquki eliphezulu kwaye oluzenzekelayo edge uphawu.
Ukongeza, sibonelela uyilo Cad, Auto IZINCOKO, yokuhlela oluzenzekelayo, oluzenzekelayo software photo digitizer kunye laser ukusika ukuphumeza inkqubo ezenzekelayo.
Kutheni khetha laser nempahla yokunxiba siko?
OMKHULU Laser owakha izisombululo laser of ulwenziwo nokonwabela kushishino lwefashoni kunye nempahla.
Xa kuthelekiswa isithole isixhobo, Novunayo laser unalo iingenelo ngendlela ophezulu, ziphele ngaphantsi, ezinemiphetho cut ecocekileyo, kunye nokuphela kwegqabi automatic atywinwe.
yokwakha oluzenzekelayo, isondlo esizenzekelayo ngokuqhubekayo laser ukusika, ophawulwe nge imveliso ngobuninzi kunye novavanyo, ukugcina imisebenzi manual ekusasazeni kunye nokwenziwa ipateni.
Sebenzisa software yokwakha yobungcali ukwandisa ukusetyenziswa eziphathekayo ubuncinane 7%. zero Umgama phakathi Iipateni ingaba intsebenziswano edge cut.
iphakheji software Professional, kulula ukuba ukufezekisa ipateni ukuyila, ukwenza elimakishayo, photo digitizer nokuhlela. data Pattern kulula ukulawula kwiPC.
Imingxuma (perforating), imicu, hollowing, ngentlabo, i-engile obtuse ukusika, ifomathi processing ultra-elide, oomatshini laser ingaphatha naziphi na iinkcukacha ngokugqibeleleyo.
Sizimisele ekuncedeni ikuphuhlise uhlaziye imveliso yakho lula kwaye ngcono kunye neenkqubo zethu laser eyahlukeneyo.
Yethu CO 2laser zezona ukusika ndikrola uluhlu olubanzi amalaphu kunye namalaphu.
Egolide Laser kaThixo CO 2koomatshini laser loshishino fashion nempahla, amalaphu olunye-sangqa kuba laser kunqunyulwa ngok nenobuchule, ngokunjalo oqingqiweyo egqojozwe ubuncwane umakhwapheni ukuba eziwela ngaphaya. Ngoko ukufikelela ngakumbi enemveliso kunye laser kunokuba ngemela.
Thatha ithuba CO OMKHULU Laser ka- 2 laser oomatshini, ukuba ube yinkokeli kwimarike yakho.
CO 2flatbed laser ukusika machine ne swa
Galvo laser uluhlu eziwela umatshini ukusika mfanekiso
CO 2 laser mgawuli ngenxa plaids kunye iziqwengana nelaphu
Vision laser mgawuli for ngelaphu eprintiweyo
Laser zifa ukusika umatshini sticker iingcinga
Yintoni uhlobo ilaphu efanelekileyo CO2 laser processing na?
Ipholiyesta, Aramid, le Kevlar, eboyeni, Cotton, Polypropylene, lyu, Fibreglass, Spacer amalaphu, Waziva, Silk, uboya lokucoca, umqhaphu zobugcisa, umqhaphu zokwenziwa, Foam, eboyeni, izinto Velcro, amalaphu ezinithiweyo, amalaphu umnatha, eliphambili, Polyamide, etc .
Sincoma koomatshini laser ilandelayo
zeefashoni kunye kwishishini lempahla
CO2 laser koomatshini OMKHULU Laser kaThixo zezona ukusika, nokukrola umqhaphu ngobuciko bhetyebhetye kwimveliso.
High speed laser ukusika ingubo Ilaphu yokuthutha kunye auto-feeder. Kabini isakhiwo Y-axis. 80 watts ~ 150 watts
Galvo Laser Ukucanda and Perforating Machine
A laser Umatshini ubhetyebhetye ongenza zombini ukusika kunye perforating ngenxa iijezi, ipholiyesta, microfiber, nokuba ilaphu twa.
Laser umsiki nge Camera
lweehagu oluqhubekayo, auto-ukuqatshelwa laser nokusika amalaphu ezishicilelweyo neelebhile isambatho. indawo Scan 1500mm × 900mm